Ehlala yi-keratin kuthandwa kakhulu phakathi kwabesifazane yesimanje. Yini enye engcono kunalokhu ngokuphelele bushelelezi, ugeleza izinwele shiny? Nokho, phezu izinwele ngemva kwalokhu izinqubo imilingo badinge ukunakekelwa okukhethekile. Ukuze kube izinwele ecwebezelayo walondoloza isikhathi eside, ochwepheshe batusa ukuhlanza kahle kubo. Namuhla sizogxila umkhiqizo omusha we umkhakha ubuhle njengoba bezsulfatnye amashampu ngemva yi-keratin Ehlala. Uhlu imikhiqizo ethandwa kakhulu sichaziwe ngezansi.
La mathuluzi bahlinza izinwele is soft kakhulu, hhayi ukugeza ngaphandle yi-keratin zabo zenani elikhulu. Kuyaziwa ukuthi yalolu ketshezi, elikhishiwe kwezinye izinguqulo isakhiwo izinwele, babanike umphumela zokwelapha. Phakathi naleso sikhathi, kufanele kuphawulwe ukuthi ngaphambi nsuku zonke nokusebenzisa isitayela amashampu bezsulfatnye izindlela abanamandla.
Izici ukunakekelwa izinwele emva Ehlala yi-keratin
Kubalulekile kakhulu ukuba banamathele master amabhodi ezinsukwini ezintathu zokuqala ngemva kokuhlinzwa. Kulezi amahora 72 akukwazi izinwele ezimanzi. Ukugeza kubhavu noma eshaweni, kubalulekile ukuvikela inhloko cap ekhethekile. Futhi, awukwazi ukubhukuda olwandle, ukuya pool noma sauna. Kubalulekile ukuba bayakhohlwa ziboshwe ngozankosi, zase izinwele dryers. Omunye kungaba kuphela ngobumnene nekama.
Ukuze ushiye on izinwele okuthiwa imibimbi, akufanele embondelene curls nge izikhonkwane futhi hairpins. kamuva amathathu kuphela izinsuku, ungakwazi ugeze izinwele zakho. Isetshenziselwa ukwenza lokhu, ke bezsulfatnye amashampu.
Kungani kufanele usebenzise amashampu bezsulfatnye
Insipho, njengengxenye okuyinto azikho sulfate, ukuvumela ukuhlanza ngokucophelela izinwele futhi sezinwele. Bezsulfatnye amashampu, ukubuyekezwa zazo zingatholakala kunoma iyiphi iforamu kwemikhiqizo izinwele ukunakekelwa zenzelwe ukusetshenziswa emva Ehlala yi-keratin aqukethe izithako efanayo zitholakala indawo izinwele nokubuyiselwa. Ngokusho kochwepheshe, ukhetho best lapho kukhona yi-keratin imoto. Ukwakheka okunjalo ocebile sithuthukisa umphumela ngezinye izikhathi inqubo.
amashampu Iningi zanamuhla iqukethe ukubunjwa yabo Sodium Lauryl sulphate (SLS). Le into ingenye ezishibhile kakhulu yesivini ejenti. Nokho, ukusetshenziswa njalo izihlanzi kudala izinkinga eziningi. Ngakho, ne SLS amashampu, kanye sulfate ezifana ALS, SDS kanye SLES, ungakwazi baxabane nomzimba, dandruff, ukulunywa bese we sezinwele. Lezi izinto sokudiliza yi-keratin, ngokushesha "ukudla" nomphumela emangalisa kwi-nqubo ye izinwele Ehlala.
Ezinye brand yezimonyo sinake le nkinga esiphuthumayo futhi waqala ukuveza amashampu ngaphandle sulfate. amakhambi ezinjalo iphephe kuwo impilo izinwele kanye ekhanda, kanye umsebenzi oncomekayo ne udoti.
Kuhle bezsulfatnye amashampu: Izibuyekezo
Yini bezsulfatnye amashampu ngemva Ehlala yi-keratin athandwa kakhulu phakathi kwabesifazane? Uhlu indlela ethandwa kakhulu cabanga njengamanje:
umkhiqizo TM Logona;
amashampu kusukela Aubrey Engokwemvelo;
Shampoo Organic Isitolo;
Ngezansi sibhekisise ngalinye amaphuzu.
Amashampu German brand Logona
imikhiqizo Logona yenkampani angathengwa ruble 300-400 (250 ml izimali).
Ukwakheka mikhiqizo yezimonyo akakwazi ngokuthi konke yemvelo, kodwa awekho sodium coco-sulfate. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukuqhutshwa lokhu brand athandwa kakhulu phakathi abathandi izimonyo organic. Ngokusho abathengi, imoto foams ezimbi, kodwa namanje ahlanzekile ngokuphelele. Imikhiqizo ahlanganiswe izakhi ewusizo ezidingekile isixazululo yezinkinga ezihlukahlukene izinwele. Bayavuma ukuthi ithethelele nomkhiqizi isicelo.
Phakathi bokwenza imoto Logona trichologists uqaphele khona utshwala kule formula, okungaba kancane ezomile ekhanda ebucayi.
Amashampu inkampani American Aubrey Engokwemvelo
Ngakho, ngaphambi kokuba kube khona umbuzo mayelana nokuthi uluphi uhlobo imoto ukhetha? Izindleko isilinganiso ukukhiqizwa lokhu inkampani ruble 700 per 325 ml. Expensive. Kodwa! Ngokungafani odlule brand izimpahla, ukubunjwa mikhiqizo akuyona kuphela ukungabi khona eziyingozi kwezempilo nobuhle izinwele sulfate, kodwa futhi khona lenqwaba isitshalo amafutha abalulekile kanye ezikhishwe.
Ngokusho izimpendulo zabesifazane kusukela Aubrey Engokwemvelo amashampu bayindlala ngenxa ukwakheka zemvelo, okungadingi nesisindo phansi izinwele. Kusho inkampani akusho ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu, ukulunywa, nokungezwani komzimba nezinto. Ukuvumelana sifana imikhiqizo jelly okhathalelayo. Ngosizo amantombazane abathanda uzizamele buso uwoyela, omkhulu ukuze basuse izinwele.
Amashampu brand German Weleda
Izimpendulo ezivela abathengi, bezsulfatnye emihle ithela amashampu inkampani Weleda. Kusho izindleko enkampanini ruble 500 per 190 ml. ifomula yabo ocebile uyasondla izinwele emva Ehlala yi-keratin, uyazondla, kunikeza olubushelelezi futhi kukhanye.
abesifazane abaningi bathi ikhanda ngemva ukugeza isikhathi eside uhlala ahlanzekile. Curls kukhona ukukhanya esithambile. Futhi kusukela ukubuyekezwa, yabe seyaziwa ukuthi ngemva kokusebenzisa imoto kumele usetshenziswe kuya-hair conditioner, ke ngeke Fluffy futhi ukungena nakwamanye amazwe. Lapho phambi abesifazane kuphakamisa umbuzo wokuthi onjani imoto ukukhetha, ngokuvamile baya inkampani Weleda.
Shampoo inkampani Russian Organic Isitolo
Izindleko amashampu nomkhiqizi yasekhaya imayelana 150 ruble angu 280 ml. Naphezu intengo isabelomali, banayo izinzuzo eziningi. Ngo ukwakheka imikhiqizo yezimonyo Awekho amakhemikhali anamandla, okuyinto singageza aphume yi-keratin izinwele. Shampoo akuyona lather ezinhle, kodwa ukuqeda ukungcola kusuka okokuqala. Njengoba Bathi izibuyekezo zabo owesifazane, ngemva ukugeza izinwele ithambe futhi shiny. Phakathi minuses - a izinwele kancane gesi futhi kuqhathaniswa ngokushesha spoilt.
Bezsulfatnye imoto Siberica
ngokuqinile Russian Natura Siberica futhi njengelinye lamazwe abaholi izimonyo emakethe yemvelo yasekhaya. Umkhiqizi ngoba amashampu yabo isebenzisa ezikhishwe samaminerali izitshalo laseSiberia. Bezsulfatnye kusho ukugeza izinwele zakho zingenalo ukubunjwa yayo amakhemikhali oluyingozi. Zingasetshenziswa nsuku zonke ngaphandle kokwesaba umonakalo izinwele. izimonyo emakethe linikeza ezihlukahlukene amashampu bezsulfatnye ngemva Ehlala yi-keratin. Uhlu indlela ethandwa kakhulu "Natura Siberika" kuphambi kwakho:
Shampoo zonke izinhlobo izinwele "Ivolumu yesondlo";
Shampoo "Ngiphakathi nendawo" ekhanda ebucayi;
imoto for izinwele oily "Ivolumu ibhalansi";
Shampoo "izithelo Royal";
imoto for izinwele ukhathele futhi buthaka "Ukuvikeleka bese Amandla" nabanye.
Iningi imikhiqizo umthengi brand Natura Siberica ukhuluma kakhulu kuye. Ngakho, la mantombazane ukuthi emva ukugeza ikhanda izinwele zikhula ngokushesha futhi babe voluminous kakhudlwana futhi shiny. Kukhona impendulo okungekuhle okusekelwe izintandokazi ngabanye abathengi. In amazwi abanye abesifazane kusukela Natura Siberica imoto kancane omisiwe izinwele futhi mylyatsya ezimbi.
Sibuyuyekeze okungcono amashampu bezsulfatnye ngemva Ehlala yi-keratin. Uhlu lezi izihlanzi ubanzi kakhulu, ngakho ukuba zibhale bonke njengengxenye athikili yethu akunakwenzeka. Ngakho sima ethandwa kakhulu. Efingqa, kubalulekile ukugqamisa amathuba abo kanye nobubi obuthile.
Izinzuzo amashampu ngaphandle sulfate
Ngakho, siye wabalula esivelele kunazo zonke amashampu ngaphandle sulfate. Ukusetshenziswa la mathuluzi ukutshela izinwele zabo ezilandelayo izinzuzo:
musa abangele isikhumba ukucasuka, dandruff, komzimba;
hhayi babhebhethekise izinwele;
esingaphansi amashampu ezivamile, wageza aphume zombala izinwele Umbala yi-keratin;
ukwenza izinwele bushelelezi, nokususa fluffiness.
Okumbi amashampu ngaphandle sulfate
Naphezu eziningi eziwusizo, izindlela ezinjalo ukuze ugeze izinwele zakho, ngokuvumelana komthengi, kusadingeka ezithile ezingathandeki:
ngaso sonke isikhathi esihle iphume inhloko kanye izinwele; ukuze ahlanze izinwele kusukela isitayela amathuluzi, kungase kudingeke ube pomyvok ezimbalwa;
ungamphathisi dander fungal;
ngenxa ikhono abampofu ukuba foam e amashampu bezsulfatnyh ukusetshenziswa okusezingeni eliphezulu;
ukuthola yi esitebeleni, kungathatha cishe inyanga.
Lapho ukuthenga bezsulfatnye amashampu?
Ezitolo zendabuko, okwenza ukuthengisa IMisa Market, akusiyo njalo kungenzeka ukuba ukuhlangabezana amashampu izinwele ukunakekelwa emva Ehlala yi-keratin. Indlela elula ukuthola izindlela ezinjalo ekhemisi, esitolo online, yebo, esitolo izimonyo professional. Khumbula ukuthi ukuthenga imoto bezsulfatnye ngemva Ehlala yi-keratin, uhlu okuyinto sahlola ngenhla, kuba okokuqala kudingekile ukuba banake kwengoma. Bezsulfatnogo ku imbiza umkhiqizo kufanele kumakwe ngokuthi sulfate-DRM.
Manje uyazi ukuthi hlobo luni imoto ngemva yi-keratin eqondisa ukukhetha futhi kuphi uyithenga. Ngokunakekela efanele izinwele zakho uyohlale enhle, kodwa umphumela lwekhanda inqubo izinwele nokubuyiselwa uzoqhubeka isikhathi eside.
Yokuvikela ngocwazi izinwele ngaphambi nangemva: umthengi izibuyekezo mayelana isevisi
Kwekhanda Cristiano Ronaldo: incazelo kanye nokusebenza amasu
Electronic excel-spreadsheet - ithuluzi eliwusizo ukuhlaziya idatha
Indlela ukukhetha amadoda sika imoto efanele? Izibuyekezo